पारिजात: आन्दोलनभित्र, आन्दोलनबाहिर | साहित्यपोस्ट
कविताकाे कथाः पारिजात र उनकाे आन्दोलन
साहित्यपोस्ट	 बिहीबार श्रावण १५, २०७७ १०:०१ मा प्रकाशित
पारिजातको नाम नेपाली साहित्यको आकाशमा चम्किरहने नामको रूपमा पाठकको मस्तिष्कमा दर्ता भएको छ । नेपाली समाजमा दुई ढुङ्गामा खुट्टा राख्नु हुँदैन भन्ने मानसिकतालाई पारिजातले चिर्दै अलग अलग विधामा कलम चलाएकी छन् । उनले जुन विधामा टेकेर कलम चलाए पनि पाठकलाई निराश बनाउने काम गरिनन् । उनका कृतिहरू नेपाली साहित्यमा अब्बल कृतिकै रूपमा चिनिएका छन् । आज हामीले उनका कवितामाथि कुरा गरे पनि उनले आख्यान विधामा पाएको मदन पुरस्कार छुटाउनु हुँदैन । त्यसो त पारिजातलाई मदन पुरस्कार पाउने पहिलो महिलाको रूपमा पनि नेपली समाजले चिन्दैआएको छ ।
हामीले पारिजात भनेर चिनिरहँदा उनको वास्तविक नाम भने हाम्रो मस्तिष्कबाट ओझेल हुन दिइरहेका त छैनौँ ? बिष्णुकुमारी वाइवा मात्र भन्ने हो भने नेपाली पाठकले के आँखा चिम्लेर नै पारिजातको तस्बिर सम्झन्छ ? प्रश्न छ । खैर, उनलाई नेपाली साहित्यले पारिजात नै भनेर आफ्नो कित्तामा समावेश गरेको भने पक्कै हो ।
उनको स्वभाव पानीमा रुझ्नु, कल्पना गर्नु थियो । सा–साना कुराले उनलाई निकै गहिरो प्रभाव छाड्ने गर्दथ्यो ।
उनका कृतिहरू प्रगतिवादी, समाजवाद, मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद, नारीवाद, विसङ्गतिवादको भाव छाडेको पाइन्छ । राजनीतिक यात्रामा पनि उनको विशेष भूमिका रहेको पाइन्छ । पारिजात वि.सं. २०३५ र २०३६ सालको आन्दोलनमा ज्यादै सक्रिय भइन् । वि.सं. २०३६ सालमा प्रगतिशील लेखक कलाकार सङ्घको स्थापनाको लागि पनि उनको सक्रिय भूमिका रहेको थियो ।
उनको आन्दोलन कविता निकै नै चर्चित कविता हो । जब जब मानिसहरू वा शोषित र उत्पीडितहरू आफ्ना हक, अधिकार, स्वतन्त्रता र पहिचानका लागि सडकमा उत्रन्छन् तब तब उनको आन्दोलन कविताको माग हुन्छ । मौन भएर बसेको यस कविताले आन्दोलनमा एक भाषा बनेर अग्र पङ्क्तिमा उभिएको भान हुन्छ । प्रस्तुत छ पारिजातको आन्दोलन कविता ।
मुक्तिको पक्षमा होस् वा शोषितको वकालत गर्नलाई होस्, पारिजातको आन्दोलन कविताले नेपाली साहित्यमा मात्र नभएर नेपाली राजनैतीक उथलपुथलमा समेत भूमिका खेलेको पाइन्छ ।
उनको याे कविता विभिन्न अङ्कमा छापिएका छन् । उनले प्रस्तुत कविता कुन मितिमा लेखिन् भन्नेकुरा चाहिँ गोप्य नै छ । वा भनौँ प्रथमपटक कहाँ र कहिले प्रकाशित भयो भन्ने ज्ञात नभए तापनि पारिजातका कविताहरूमा उनको आन्दोलन कविता भेट्न सकिन्छ ।
युवाकवि शरद ऋतुले बुझेकाे पारिजात र आन्दोलन कविताः
कञ्चनजङ्घाका चिसा सासहरूले म्वाइँ खाएको पहाड दार्जीलिङमा हुर्किएकी पारिजातको जीवन कुनै मिथक जस्तो लाग्छ । आदर्शजस्तो सुनिने सङ्घर्ष यथार्थमा नै उनको जीवनको पर्यायवाची थियो । अस्तित्ववादी, विसङ्गतिवादी कला–यात्राको रूझानदेखि जीवनवादी, प्रगतिशील विचार साहित्यसम्मको उनको यात्रा आफैँमा एउटा विशद ग्रन्थ हो र राजनीतिक/वैचारिक प्रगतिवादीहरूका निमित्त आदर्श संहिता पनि ।
रिमालको आमाको सपनाजस्तै पारिजातको सपना पनि उही छ, मुक्ति । आन्दोलन, सत्ताप्राप्ति र राजनीतिका विविध स्वार्थहरूका विशृङ्खल क्रीडाभूमि रहिआएको यो देशका सचेत, चेतनशील कवि,लेखकहरूको सपना र सङ्घर्ष सधैँ उही नै छ । प्रस्तुत कवितामा पनि उनी तमाम प्रकारका बन्धन, अव्यवस्था र अन्यायहरूका विरूद्ध मुक्तिको चाह राख्छिन् । मुक्ति अवश्यम्भावी छ । मुक्तिका चाहहरू काँक्रा, फर्सीका बिऊ जस्तो पट्ट फुटेर समयानुकूल माटो र ऋतुमा झाँगिदै, लहरिँदै जान्छन् । बन्धन र अन्यायका प्रतिरोधमा लाखौँ स्पार्टाकसहरू लामबद्ध हुँदैछन् र एकदिन सबै जञ्जीरहरू चुँडालेर स्वतन्त्रताको गीत गाउनेछन् ।
पारिजातको जीवन–प्रवृत्तिमा मुखर भएर झल्किने न्याय–चेतना, जुझारूपन, साहस, अठोट उनका पछिल्ला रचनाहरूमा पनि समानधर्मी भएर देखिन्छन् । रायन, रामेश, मञ्जुल, निर्मल लामा, मोहनविक्रम सिंह लगायत अरू थुप्रै सङ्गत, अध्ययन र चिन्तनले जीवनमुखी विचारधाराप्रति एकनिष्ठ उनको जीवनको पछिल्लो कालखण्ड र रचनाधर्मिताले तमाम विपन्न, सर्वहारा, समाजको पिँधमा परेका वर्ग र जातिका लागि न्यायको आन्दोलनमा काँधमा काँध मिलाएर बढेको पाइन्छ ।
उनी कृत्रिम, मुर्दा शान्तिको पक्षमा होइन, जीवन झैँ गतिशील र शाश्वत न्याय, समानता र शान्तिको पक्षमा दृढ छिन् । उनलाई थाहा छ, शासकको कथित तानाबाना या छलछामहरूले मुक्तिको बाटो टाल्न/छेक्न सक्दैन । मुक्ति त्यति कमजोर या लाचार विषय होइन । जस्तोसुकै प्रतिबन्ध या रोकावट भए पनि मुक्तिकामी योद्धाहरू त्यसलाई परास्त गर्न सक्षम छन् या हुनेछन् ।
सतहमा जतिसुकै तरङ्गहरू थपिए पनि अन्तर्यको शासकिय प्रवृत्ति, राज्य या सत्ताको विभेदात्मक चरित्र विगतदेखि वर्तमानसम्म उस्तै जड नै छ । प्रखर समय चिन्तन र सत्योन्मुख जीवनवादी चेतनाले आलोकित रचनाहरू लामै काल–अवधिसम्म पनि आफ्नो अस्तित्व प्रमाणित गर्न सक्षम हुन्छन् । पारिजातका अन्य रचनाहरू जस्तै प्रस्तुत कविता वर्तमानमा पनि उस्तै समयसापेक्ष र सान्र्दभिक छ । यस्ता कविताहरूले परिवर्तनका लागि समय–समयमा उठ्ने आन्दोलनहरूमा र परिवर्तनकामीहरूको विचार निर्माणको तहमा पनि बलियो टेवा पुर्याउँछन् ।
कवि सरिता तिवारीका नजरमा आन्दोलन कविताभन्दा बाहिरकी पारिजातः
नेपाली साहित्य लेखन र समग्र बौद्धिक आन्दोलनमा पारिजात एउटा युग हुन् । उनको युग असामान्य रूपले ठूलो बौद्धिक बहस र आन्दोलनहरूको कोलाहलले भरिएको म पाउँछु । २००७ सालको परिवर्तनपछि विश्वव्यापी बौद्धिक लहरले रन्थनिँदै लेख्नेहरूको नयाँ छिमलमा पारिजात अग्रणीमध्ये एक रहिन् । लेखन र सामयिक बहस दुवैमा युग निर्माण र संक्रमणको नेतृत्व गर्ने पात्रका रूपमा पारिजातको उपस्थिति धेरै नै उम्दा रह्यो । यसमा फरक मत छैन ।
पारिजातले किशोरी उमेरदेखि नै कविताहरू लेखिन् । सुरुका कवितामा उमेरजन्य सहज, स्वभाविक प्रेम,प्रणय र वियोगका भाव नै आए तर समयक्रममा उनका कविताले एकालापीय बौद्धिक संवाद गर्न थाले । पहिलो कविता संग्रह ‘आकांक्षा’ देखि जीवनको उत्तराद्र्धसम्मका कविताको विचार, संरचना र बुनोटसम्मै पारिजात अरु विधामा जस्तै आयमिक छिन् । राजनीतिक चेतना र सामाजिक बोधको तहमा पुगेर लेख्न थालेपछि उनको मुखरता झनै स्पष्ट र खरो हुन्छ । स्वच्छन्दातावादी वा अस्तित्ववादी,शून्यवादी दर्शनले प्रेरित भएर लेखिँदाका उनका कविता जति आत्मकेन्द्रित र निजी छन् । जीवनका सामुहिक संघर्ष र उद्वेलनले प्रेरित भएर लेख्न थाल्दाका कविताको भाव ठीक विपरीत छन् ।
प्रेमसँगै प्रणय र दुरन्त साथको अपिल गर्ने सुरुका कवितामा उनलाई कसैकी प्रेमिका र स्वास्नी बन्ने चाहले आत्मसमर्पित मुद्रामा उभ्याइदिएको जस्तो लाग्छ । जस्तो कि–
प्रिये, आज मैले जीवन बिसर्जन गरेँ
के मलाई समात्न दिन्नौ
जसमा झुण्डिँदै झुण्डिँदै मैले
अन्तिम सास निभाउनु छ?( आधार)
यही संग्रहको अर्को एउटा कवितामा उनी भन्छिन्
म तेरै आत्माको अनन्त साथी
तेरै सिन्दूरकी दीर्घपथगामिनी (सिन्दूरको आकांक्षा)
विचारबोधका आयमिक यात्रामा उनका शब्द फेरिन थाले तर ती घोर एब्सर्डिटीले कुँदिएका छन् । अस्तित्वचिन्तन र मृत्युबोधको गहिरो भावनात्मक दवाबमा लेखिएका कविता हुन् ,यी जहाँ उनी भन्छिन्,
यो होशको संसारमा
मभित्र कोही मरिरहेछ (पागल हुन्छु कि)
‘लाहुरेलाई एक रोगी प्रेमिकाको पत्र’ यस्तै भावको उत्कर्ष अभिव्यक्ति हो ।
पछिल्ला कविता सबैभन्दा बढी जीवनप्रतिको लालसा र सामुहिक लडाइँको प्रतिबद्धताले भिजेका छन् । उनको व्यक्तिगत जीवनजस्तै छ कवितामा बाँचेको शब्दको जीवन पनि । यही चरणमा आएर उनले ‘मानुषी’ जस्तो युगान्तकारी कविता रचिन् ।बैंसालु वर्तमान कवितासंग्रह उनको वैचारिक जीवनको पछिल्लो मेनिफेस्टो नै हो भन्दा हुन्छ । ‘म कोलाहल जन्माउन खोज्दैछु’, ‘तिमी मान्छेका जात हाै’,‘एउटा स्वास्नीमान्छेको अन्तर्वार्ता’, ‘एउटा तारा जलेरै आउनुपर्छ’ जस्ता कविता उनको वैचारिक कायाकल्पका प्रमाण हुन् ।
म समीक्षक होइन, शब्दशक्ति र भावको गुणदोष मात्रै खुट्याएर पढ्न, म आफूभित्र एउटा कविलाई जिउँदो राखेर कविता पढ्न रुचाउँछु । विचारका हरेक आयामकी पारिजातलाई म समान प्रेमले पढ्छु तर चेतना बनाउने तहमा उक्लेकी पारिजात मलाई विशेष लाग्छिन् । कसैलाई पढ्न सिफारिस गर्नुपरे म ‘बैंसालु वर्तमान’ रोज्छु ।